फिल्म `फ्लप` मात्रै कति लेख्नु ? : धनबहादुर खड्का
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६९ पौष १५, आईतवार
फिल्मको धन्दामा मन्दी छाएको छ । ‘लुट’ले लुट्नु, ‘चपली हाइट’ले उचाइ नाप्नु र ‘सायद’ सफल हुनु अपवाद हुन् । यो एक वर्षमा सयको हाराहारीमा फिल्म फ्लप हुँदा झन्डै ५० करोड रुपैयाँ फिल्मको धन्दामा डुबेको छ । तर, फिल्म निर्माणको धन्दा कम भएको छैन । यही अवस्थामा फिल्म ‘धन्दा’ हलमा लागेको छ । नेपाली फिल्मका लागि अप्रिय दृष्यसँगै खुलेको अग्रेजी नयाँ वर्षको पर्दा अन्त्यमा पनि उस्तै हालतमा बन्द हुने स्थितिलाई यसले जोगाउन सक्ला कि !
किन फ्लप हुन्छन् नेपाली फिल्महरु ? : रेम बिक
फिल्मीखबर, पोखरा, २०६९ मंसिर २९, शुक्रवार
अहिले नेपाली फिल्म उद्योगमा उल्का चलिरहेको छ । हरेक हप्ता नयाँ नयाँ नेपाली फिल्महरु हलसम्म आईपुग्छन् तर दर्शक हलसम्म जाँदैनन् । फलस्वरुप केहि महिना यता प्रदर्शनमा आएका कुनै पनि फिल्मले आर्थिक रुपमा फाईदा उठाउन सकेका छैनन् । फिल्म चलेर मनग्ये आम्दानी गरेर फेरी अर्को फिल्ममा लगानी गर्ने भन्ने कुरा फिल्म निर्माताहरुको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भैसकेको छ ।
पटकथा किन कमजोर हुन्छ ? : शिबम अधिकारी
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६९ मंसिर ३, आईतवार
हरेक फिल्मसँग सरोकार राख्ने ब्यक्तिहरुले समिक्षा गर्दा या फिल्मको बिषयमा बहस चल्दा सबैको एउटै स्वर हुन्छ नेपाली फिल्मको कमजोरी पटकथामा छ । पटकथा किन कमजोर हुन्छ ? पटकथा कमजोर कसले बनाउँछ ? पटकथाकार, निर्देशक, निर्माता, बितरक या हलवाला ?
संसारभर सबैभन्दा चल्तीमा रहेको सामाजिक संजालको नामलाई टाईटल बनाएर बनाईएको फिल्म ‘फेसबुक’ प्रदर्शन अगाडी जति चर्चामा थियो र दर्शकले मन पराउने अनुमान गरिएको थियो तर नतिजा ठ्याक्कै अनुमान भन्दा विपरित निस्कियो ।
हिरोइनहरुको रेस : विजयरत्न तुलाधर
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६९ भाद्र १९, मंगलवार
नयाँ नै भोलि गएर पुराना हुने हुन् । नयाँ नै स्थापित हुने हुन् । दश वर्ष अगाडि रेखा थापा, अरूणिमा लम्साल, झरना थापा, निरूता सिंह, मेलिना मानन्धर, रेजिना उप्रेती, सञ्चिता लुँइटेलहरु नयाँ मानिन्थे । अहिले रेखा थापा र झरना थापा स्थापित नायिका मात्र नभई फिल्ममा पनि अलि बढि सक्रिय छन् ।
Results : 46 - 50 of 98